စိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း | နှမျးဖတျကြောကျ | စျေးနှုန်း | Manufacturer | ထုတ်ကုန် | Flodeal India
စိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအိန္ဒိယကနေအညိုနှင့်အဖြူရောင်စကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. သင်သည်လည်းစိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်းကျောက်သို့မဟုတ် Quartzite ကခေါ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီကြောကျခဲ၏သဘောသဘာဝတစ်မိုက်စကျင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Fantasy ဘရောင်းစကျင်ကျောက်မီးခိုးရောင် / အညိုတိမ်ထူ texture နှင့်အတူအဖြူရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်.
သငျသညျစကျင်ကျောက်များ backsplash အုပ်ကြွပ်နှင့်အတူမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အတွက်စိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကိုသုံးနိုင်သည်, ကျောက်သို့မဟုတ် slatestone. အံဝင်ခွင်ကျရူပများအတွက်, သငျသညျ Fantasy ဘရောင်း၏ကောင်တာများနှင့်အတူမှောင်မိုက်သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်ပုံးသို့မဟုတ်အဖြူပုံးကိုသုံးနိုင်သည်.
သငျသညျပိုလန်အတွက်စိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်းဝယ်နိုင်, Leathered နှင့်ရယူနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာကို Rajasthan အိန္ဒိယပြည်နယ်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့ပြားအောင်, ဒီစကျင်ကျောက်အတွင်းကြွပ်နှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ.
Fantasy ဘရောင်းစကျင်ကျောက်၏စျေးနှုန်းန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ် 4$ $ စတုရန်းပေနှုန်း FOB အိန္ဒိယဆိပ်ကမ်း to5.
ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ စိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်းကျောက်, စိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်း Quartzite
Finish အရောင်တင်, လုံးတီး
Fantasy ဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းများ၏ပြားအရွယ်အစားကိုအောက်ပါအတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရရှိနိုင်ပါသည် :
ပွတ်ကျပန်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ2စင်တီမီတာ FBMS2
ပွတ်ကျပန်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ3စင်တီမီတာ FBMS2
FBMCB24x12 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 610x305x10 မီလီမီတာ (24×12 စကျင်ကျောက်ကွက်များ)
FBMCB24x24 ပိုလန်စံကိုက်ညှိ 610x610x12 မီလီမီတာ (24×24 စကျင်ကျောက်ကွက်များ)
FBMCB-12×12 ပွတ်စံကိုက်ညှိ 305x305x10 မီလီမီတာ (12×12 စကျင်ကျောက်ကွက်များ)
FBMPT60x30 ပိုလန်ကွက်များ 60x30x2 စင်တီမီတာ –
FBMPT60x40 ပိုလန်ကွက်များ 60x40x2 စင်တီမီတာ –
FBMPT40x40 ပိုလန်ကွက်များ 40x40x2 စင်တီမီတာ –
FBMPT60x60 ပိုလန်ကွက်များ 60x60x2 စင်တီမီတာ –
ငါတို့သည်လည်း 18 အုပ်ကြွပ်အောင်″x18″ နှင့် 400mm x ကို 400mm ၏အထူတွေနဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအတွက်အုပ်ကြွပ်ချိန်ညှိ 20 မီလီမီတာနှင့် 10 မီလီမီတာ.
Fantasy ဘရောင်း၏ကောင်တာများအရွယ်အစားကိုအောက်ပါအတွက်ရရှိနိုင်ပါ :
27″x108″x2 စင်တီမီတာ FBMCT2
27″x108″X3 စင်တီမီတာ FBMCT3
အဆိုပါ Fantasy ဘရောင်းစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အိန္ဒိယကနေအခင်းများနှင့် backsplash အုပ်ကြွပ်. ဤသည်အလွန်အိန္ဒိယအတွက်အခင်းပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်. အဆိုပါစကျင်ကျောက်များ၏ပုံစံထည်များနှင့်အိမ်ရှင်အခင်းအဘို့ပုံစံအမျိုးမျိုးလုပ်ဘို့အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြု. You always get the book matched material, သငျသညျအခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်အတွက်သုံးစွဲဖို့အတှကျဒါကြောင့်လွယ်ကူသည်. ဤသည်ပစ္စည်းအလွန်အဖြစ်ကောင်းစွာကောင်တာများအောင်အတွက်အသုံးပြုသည်. Each slab can be used for long countertops of up to 110 inches. ဤသည်စကျင်ကျောက်နှင့်အတူတင်ဆောင်နိုင်ပါတယ် မြစ်အပြာရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း, ဘရူနိုအဖြူရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း, နှင့် မာကျူရီက Black စကျင်ကျောက်. ကျနော်တို့အိန္ဒိယကနေစိတ်ကူးယဉ်ဘရောင်း၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့ဦးဆောင်နေကြ. သငျသညျတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါအတွက်အရည်အသွေးမြင့် Fantasy ဘရောင်းတင်သွင်းနိုင်သည်, tiles, နှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများကျွန်ုပ်တို့ထံမှအရွယ်အစား.
4 ပေါ်အခြေခံကာ 30 မဲ
စက်တင်ဘာလ 9, 2018 |0မှတ်ချက်များ
သင်က White ကကျောက်ကောင်တာများအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်အားလုံး
မတ်လ 9, 2018